မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘော်ဒီကိုရဖို့ ၀ယ်စားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ကြည့်ရအောင် ရှဲပေးလိုက်ပါ။ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘော်ဒီကိုရဖို့ ၀ယ်စားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ကြည့်ရအောင် ရှဲပေးလိုက်ပါ။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘော်ဒီကိုရဖို့ ၀ယ်စားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ကြည့်ရအောင် ရှဲပေးလိုက်ပါ။
Apann Pyay 10:51 AM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
“သြော် ဒါလား မနေ့က ငါရယ် ငါ့ဆော်ရယ် တည်းခိုခန်းမှာရောက်နေလို့ ပိတ်ထားလိုက်တာ”
“ဟာ သားကြီး စွံလှချည်လား မင်းသူ့ကို ခိုးပြေးလိုက်တာပေါ့”
“မင်းကလည်း ဝေးလိုက်တာ ဒီခေတ်ကြီးထဲ ဆော်ကိုခေါ်ပြီး တည်းခိုခန်းသွားနေတာတွေ တစ်ပုံကြီးပါကွ”
“ဟာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ ဒါဆိုမင်းညက အဲ့မှာ ကောင်မလေးနဲ့ ဘာတွေများလုပ်နေလို့……”
“သားကြီး မင်းတော်တော် ထူတာပဲ နှစ်ယောက်တည်းဆိုမှတော့ ဘာလုပ်မလဲဟ လင်မယားလုပ်တာဟေ့ ဟုတ်ပလား”
“ဟာ မင်းသူ့ကို ယူမှာပေါ့”
“ရော် …ခက်ပီ သားကြီးရာ ရည်းစားထားပါတယ်ဆို အဆင်မပြေရင်ပြတ်ပေါ့ ဖူးစာပါရင်ငြားပေါ့ဒါပဲရှိတာ ငါမဖြေတတ်ဘူး”
“ဟင် မင်းကလည်း တာဝန်မယူချင်တဲ့သဘောပေါ့”
“ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာလေ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တော်ကီ ကြွယ်ရင် မိန်းမလှလေးတွေ body ဝယ်စရာတောင်မလိုဘူးကွ”
“မိန်းကလေးက ဘယ်ကျေနပ်နိုင်မလဲကွ ဘဝနဲ့ရင်းရတာ”
“ဟား အခုခေတ်က ကွန်ဒုံးက လိုသုံးဖြစ်သလို မိန်းမဆိုတာလည်း ငွေပေးရင် ကျေအေးတတ်ပါတယ်ကွာ…”
“သူကမင်းကို တကယ်ချစ်လို့ ဒီလောက်ထိပေးဆပ်တာဖြစ်မှာပါ ကွာ မင်းသူ့ကို ယူလိုက်ပါ”
“ယူစရာလားဟ မနေ့ညကပဲ သူ့ကို တာဆေး ဝယ်ပေးပြီးသား သူနဲ့ငါလက်ထပ်ဖို့ကဝေးကြီး ဒီလို အညှာလွယ်နေမှတော့ ဘယ်ကြာမလဲ ဖောက်ပြန်မှာပေါ့ဟ”
“အဲ့လိုလည်း မတွေးနဲ့လေ မင်းလည်းသူ့ချစ်လို့ သူနဲ့တူတူနေတာ သူကလည်းမင်းကို တကယ်ချစ်လို့ ယုံလို့ ပေးဆပ်တာဆိုရင်ကော”
“သားကြီး ဟာသတွေလာမပြနဲ့ ငါစိတ်မဝင်စားဘူး အထာကျတဲ့ဆော်တွေတစ်ပုံကြီး သူမပြတ်လည်း ငါပြတ်တဲ့ခါ နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ကွ”
“ဒါဆို သူအတွက် မင်းဘက်က မသေချာဘူးပေါ့”
“ထားပါတော့ သားကြီးရာ သူလည်းတာဆေးနဲ့အဆင်ပြေနေလောက်ပီ မင်းနဲ့ငါ ဝါးတီးသွားဆွဲစို့ နောက်မှ မင်းတရားဆက်ဟော”
“သြော် …မင်းကတော့ သူ့အတွက် တားဆေးပေးခဲ့တာ သူအတွက် အရှက်တရားကတော့ တားဆေးမရှိဘူးကွ ”
‘သားကြီး မင်းမှာ ညီမ မရှိဘူးလား”
“ညီမလည်းမရှိဘူး အမလည်းမရှိဘူး ဘာလဲ မင်းက စောနက ဟာကို ငါ့ ဝဋ်လိုက်မှာစိုးရိမ်နေတာလား”
“ဟား ငါ့မှာမောင်နှမ မရှိဘူး အဲ့တော့ ဘာဝဋ်မှလည်မလဲ ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ် ဆော်ကြည်တာ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့ ကွာ ဟက်ဟက်;;”
“ကို ချစ်ကို ပစ်မသွားနဲ့နော် ကို့အလိုကျ အကုန်ဖြစ်စေရမယ်”
“အေးပါချစ်ရယ် ပစ်ဘူးနော် ချစ်ကိုချစ်လို့ ဒီအဆင့်ထိ ကိုစွန့်စားခဲ့တာပေါ့ ”
“ရော့ တားဆေးလေး တစ်ပတ်တစ်ခါသောက်နော် “😪
“ဟုတ်ကိုကို ချစ်ဗိုက်မပေါ်ဖို့ တားဆေးရှိတယ် ကိုပစ်သွားတဲ့အခါ ချစ်အရှက်ရတာ တားဆေးမရှိဘူးနော် အရှက်နဲ့လူလုပ်နေရတာပါ ချစ်တို့က”😪
“သားကြီး ငါ ဟိုဆော် နဲ့ပြတ်သွားပြီ ”
“ဟေ ဟုတ်လား ဘာဖြစ်ကြတာလဲ”
“အေး သူက အရင်က ရည်းစားရှိခဲ့ဖူးတယ်ဟ”
“အာ မင်းကလည်း သူလို အညှာလွယ်ပုံနဲ့ သူများစားပြီးသားကြီး ငါမယူချင်ပါဘူး”
“ဟာ သားကြီး တစ်ဖက်သက်ဆန်တာ မင်းပြောတာက”
“သူကတော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပြောပေမယ့် ငါကတော့ အချိုသပ်ပြီး ဖြတ်လိုက်တယ် ”
“သေချာစဉ်းစားပါဦး ဟိုက မိန်းကလေးလေ တွေးကြည့်စမ်းပါကွ မင်းဆော်ကြည့်ရတာ အဲ့လိုထဲကဟုတ်ပါဘူး ရိုးရိုးလေးပါ”
“ငါမသိဘူးအဲ့ဒါတွေ အေး အဲ့အကြောင်းပြောတာ ဘာပြောပြော မဆက်တော့ဘူးပြတ်ပြီ အခုတောင် နောင်တရတယ် ”
“အေးပါကွာ မင်းကံပေါ့ ဝဋ်ဆိုတာ မကြာဘူးနော်”
“ဝဋ်……ထားပါတော့ ဒါပဲနော် ဖုန်းချပီ”
“ငါ့ကောင်ကြီး မင်းကို မတွေ့တာကြာလို့ အိမ်ထိလိုက်လာခဲ့တာ နေမှကောင်းလားလို့”
“ဟာ မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား ဘာဖြစ်တာလဲဟ”
“သားကြီး မင်းပြောတာမှန်တယ်ကွာ” (ဖက်ပြီး ငိုသည်)
“ဒီလိုပါတော် သူ့သမီး မှာ ဗိုက်ရနေလို့လေ ”
“ဟာ ဟုတ်လား မင်းကလည်း စောစောစီးစီး မြေးချီရတော့မယ်ဟာ ဝမ်းသာရမယ်လေ”
“မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး” (ကယောက်ချောက်ချား)
“ဟေ ဘာလဲဟ ပြောပြပါကွာ”
“ငါ့သမီးလေး ငါ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နေလာခဲ့တာ ခုအသက်၁၈နှစ် ထိပါမင်းသိပါတယ်”
“ဒါပေမယ့်ကွာ မနေ့က ကျောင်းကအပြန် သူနေမကောင်းဘူးဆိုပြီး အိပ်နေတာ ငါတို့လဲ ဘာမှန်းမသိရလို့ ဆရာဝန်ခေါ်စစ်မှ……ကိုယ် ကိုယ်ဝန်တဲ့ကွာ ဟီးးး”
“ဟာ မင်းပြောတဲ့ တား တားဆေးရော”
“မနောက်ပါနဲ့ ကွာ ငါ့သမီးကိုမေးတယ်”
“သူတို့အရမ်းချစ်တာတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ လိုက်လျောပေးလိုက်မိတာပါ တဲ့ တားဆေးမသုံးလိုက်မိဘူး သူ့ကောင်လေးက ရတယ်ဆိုလို့တဲ့ကွာ”
“ဟေ သူ့ကောင်လေးဘယ်မှာလဲ ပြောမပြဘူးလား”
“အဲ့ကောင် /တောက်!! ဟိုနေ့ကပဲ ခရီးထွက်သွားတယ်တဲ့ကွာ”
မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ကွာ သူကငါ့သမီူးကို အပျော်ကြံတာ ငါသိတယ်ငါပြန်ဝဋ်လည်တာ ဟူးး!!!;;;”😪
“မဟုတ်ပါဘူး စိတ်အေးအေးထားပါကွ မင့်သမီးရော ”
“သူအရမ်းရှက်နေတယ် မစားမသောက်နဲ ဖျားနေတယ် ”
“မင်းသမီးလေးကို ဂရုစိုက်ပါကွာ မင်လည်းဂရုစိုက်ဦး”
“ငါရှက်တယ် ကွာ ငါအရမ်းရှက်တယ် ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ သမီးမိုက် ငါ့မျကိနှာကို အိုးမဲသုတ်တယ် တောက်!!”//😪
“ဟာ မင်းအဲ့လိုပြောထွက်တယ်နော် ဒီမှာ ဟျောင့် မင်းရက်စက်စွာ ခြွေချခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတွေတုန်းက မင်းနင်းချေပြီး လွှင့်ပစ်ခဲ့သေးတာပဲ အခုမင်းအလှည့်ကျတော့ မင်းက ကြွေပန်းဖြစ်မှာကြောက်လို့ ရေလောင်းပေါင်းသင်နေသော်လည်း ကြွေသွားတဲ့ပန်းဖြစ်တော့ မင်းက နာကျင်တတ်ပြီးပေါ့နော် မင်းပြောဖူးတယ်လေ တားဆေးရှိရင် ပြီးတယ်ဆို”
“ငါသိပါပြီကွာ ငါ့မှာ မောင်နှမ မရှိပေမယ့် ငါ့သားသမီးနဲ့ကျမှ ဝဋ်လည်ရတယ် ငါသိပါပြီ ငါနားလည်ပါပြီကွာ ”
“အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး တစ်သက်လုံး ငါဒီစကား ငါ့နားမှာ ကြားလို့ ငါနောင်တရပါပြီကွာ ;;(ငိုနေလျက်)😭
👉လူတစ်ယောက်အတွက် အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိ။
သိက္ခာမဲ့ သူဟာ ဘဝနိမ့်ကျမှုအတွက် ရာနှုန်းတစ်ဝက် သေချာနေပါပြီ။
“သွျော ဒါလား မနကေ့ ငါရယျ ငါ့ဆျောရယျ တညျးခိုခနျးမှာရောကျနလေို့ ပိတျထားလိုကျတာ”
“ဟာ သားကွီး စှံလှခညျြလား မငျးသူ့ကို ခိုးပွေးလိုကျတာပေါ့”
“မငျးကလညျး ဝေးလိုကျတာ ဒီခတျေကွီးထဲ ဆျောကိုချေါပွီး တညျးခိုခနျးသှားနတောတှေ တဈပုံကွီးပါကှ”
“ဟာ အဲ့လိုမဟုတျဘူးလေ ဒါဆိုမငျးညက အဲ့မှာ ကောငျမလေးနဲ့ ဘာတှမြေားလုပျနလေို့……”
“သားကွီး မငျးတျောတျော ထူတာပဲ နှဈယောကျတညျးဆိုမှတော့ ဘာလုပျမလဲဟ လငျမယားလုပျတာဟေ့ ဟုတျပလား”
“ဟာ မငျးသူ့ကို ယူမှာပေါ့”
“ရျော …ခကျပီ သားကွီးရာ ရညျးစားထားပါတယျဆို အဆငျမပွရေငျပွတျပေါ့ ဖူးစာပါရငျငွားပေါ့ဒါပဲရှိတာ ငါမဖွတေတျဘူး”
“ဟငျ မငျးကလညျး တာဝနျမယူခငျြတဲ့သဘောပေါ့”
“ဒီခတျေကွီးထဲမှာလေ ယောကျြားလေးတဈယောကျ တျောကီ ကွှယျရငျ မိနျးမလှလေးတှေ body ဝယျစရာတောငျမလိုဘူးကှ”
“မိနျးကလေးက ဘယျကနြေပျနိုငျမလဲကှ ဘဝနဲ့ရငျးရတာ”
“ဟား အခုခတျေက ကှနျဒုံးက လိုသုံးဖွဈသလို မိနျးမဆိုတာလညျး ငှပေေးရငျ ကအြေေးတတျပါတယျကှာ…”
“သူကမငျးကို တကယျခဈြလို့ ဒီလောကျထိပေးဆပျတာဖွဈမှာပါ ကှာ မငျးသူ့ကို ယူလိုကျပါ”
“ယူစရာလားဟ မနညေ့ကပဲ သူ့ကို တာဆေး ဝယျပေးပွီးသား သူနဲ့ငါလကျထပျဖို့ကဝေးကွီး ဒီလို အညှာလှယျနမှေတော့ ဘယျကွာမလဲ ဖောကျပွနျမှာပေါ့ဟ”
“အဲ့လိုလညျး မတှေးနဲ့လေ မငျးလညျးသူ့ခဈြလို့ သူနဲ့တူတူနတော သူကလညျးမငျးကို တကယျခဈြလို့ ယုံလို့ ပေးဆပျတာဆိုရငျကော”
“သားကွီး ဟာသတှလောမပွနဲ့ ငါစိတျမဝငျစားဘူး အထာကတြဲ့ဆျောတှတေဈပုံကွီး သူမပွတျလညျး ငါပွတျတဲ့ခါ နောကျတဈယောကျပေါ့ကှ”
“ဒါဆို သူအတှကျ မငျးဘကျက မသခြောဘူးပေါ့”
“ထားပါတော့ သားကွီးရာ သူလညျးတာဆေးနဲ့အဆငျပွနေလေောကျပီ မငျးနဲ့ငါ ဝါးတီးသှားဆှဲစို့ နောကျမှ မငျးတရားဆကျဟော”
“သွျော …မငျးကတော့ သူ့အတှကျ တားဆေးပေးခဲ့တာ သူအတှကျ အရှကျတရားကတော့ တားဆေးမရှိဘူးကှ ”
‘သားကွီး မငျးမှာ ညီမ မရှိဘူးလား”
“ညီမလညျးမရှိဘူး အမလညျးမရှိဘူး ဘာလဲ မငျးက စောနက ဟာကို ငါ့ ဝဋျလိုကျမှာစိုးရိမျနတောလား”
“ဟား ငါ့မှာမောငျနှမ မရှိဘူး အဲ့တော့ ဘာဝဋျမှလညျမလဲ ကိုယျ့ကံနဲ့ကိုယျ ဆျောကွညျတာ မနာလိုမဖွဈပါနဲ့ ကှာ ဟကျဟကျ;;”
“ကို ခဈြကို ပဈမသှားနဲ့နျော ကို့အလိုကြ အကုနျဖွဈစရေမယျ”
“အေးပါခဈြရယျ ပဈဘူးနျော ခဈြကိုခဈြလို့ ဒီအဆငျ့ထိ ကိုစှနျ့စားခဲ့တာပေါ့ ”
“ရော့ တားဆေးလေး တဈပတျတဈခါသောကျနျော “😪
“ဟုတျကိုကို ခဈြဗိုကျမပျေါဖို့ တားဆေးရှိတယျ ကိုပဈသှားတဲ့အခါ ခဈြအရှကျရတာ တားဆေးမရှိဘူးနျော အရှကျနဲ့လူလုပျနရေတာပါ ခဈြတို့က”😪
“သားကွီး ငါ ဟိုဆျော နဲ့ပွတျသှားပွီ ”
“ဟေ ဟုတျလား ဘာဖွဈကွတာလဲ”
“အေး သူက အရငျက ရညျးစားရှိခဲ့ဖူးတယျဟ”
“အာ မငျးကလညျး သူလို အညှာလှယျပုံနဲ့ သူမြားစားပွီးသားကွီး ငါမယူခငျြပါဘူး”
“ဟာ သားကွီး တဈဖကျသကျဆနျတာ မငျးပွောတာက”
“သူကတော့ ဘာမှမဖွဈခဲ့ဘူးပွောပမေယျ့ ငါကတော့ အခြိုသပျပွီး ဖွတျလိုကျတယျ ”
“သခြောစဉျးစားပါဦး ဟိုက မိနျးကလေးလေ တှေးကွညျ့စမျးပါကှ မငျးဆျောကွညျ့ရတာ အဲ့လိုထဲကဟုတျပါဘူး ရိုးရိုးလေးပါ”
“ငါမသိဘူးအဲ့ဒါတှေ အေး အဲ့အကွောငျးပွောတာ ဘာပွောပွော မဆကျတော့ဘူးပွတျပွီ အခုတောငျ နောငျတရတယျ ”
“အေးပါကှာ မငျးကံပေါ့ ဝဋျဆိုတာ မကွာဘူးနျော”
“ဝဋျ……ထားပါတော့ ဒါပဲနျော ဖုနျးခပြီ”
“ငါ့ကောငျကွီး မငျးကို မတှတေ့ာကွာလို့ အိမျထိလိုကျလာခဲ့တာ နမှေကောငျးလားလို့”
“ဟာ မကျြနှာလညျးမကောငျးပါလား ဘာဖွဈတာလဲဟ”
“သားကွီး မငျးပွောတာမှနျတယျကှာ” (ဖကျပွီး ငိုသညျ)
“ဒီလိုပါတျော သူ့သမီး မှာ ဗိုကျရနလေို့လေ ”
“ဟာ ဟုတျလား မငျးကလညျး စောစောစီးစီး မွေးခြီရတော့မယျဟာ ဝမျးသာရမယျလေ”
“မဟုတျဘူး မဟုတျဘူး” (ကယောကျခြောကျခြား)
“ဟေ ဘာလဲဟ ပွောပွပါကှာ”
“ငါ့သမီးလေး ငါ့ရဲ့အုပျခြုပျမှုအောကျမှာ နလောခဲ့တာ ခုအသကျ၁၈နှဈ ထိပါမငျးသိပါတယျ”
“ဒါပမေယျ့ကှာ မနကေ့ ကြောငျးကအပွနျ သူနမေကောငျးဘူးဆိုပွီး အိပျနတော ငါတို့လဲ ဘာမှနျးမသိရလို့ ဆရာဝနျချေါစဈမှ……ကိုယျ ကိုယျဝနျတဲ့ကှာ ဟီးးး”
“ဟာ မငျးပွောတဲ့ တား တားဆေးရော”
“မနောကျပါနဲ့ ကှာ ငါ့သမီးကိုမေးတယျ”
“သူတို့အရမျးခဈြတာတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ လိုကျလြောပေးလိုကျမိတာပါ တဲ့ တားဆေးမသုံးလိုကျမိဘူး သူ့ကောငျလေးက ရတယျဆိုလို့တဲ့ကှာ”
“ဟေ သူ့ကောငျလေးဘယျမှာလဲ ပွောမပွဘူးလား”
“အဲ့ကောငျ /တောကျ!! ဟိုနကေ့ပဲ ခရီးထှကျသှားတယျတဲ့ကှာ”
မဟုတျဘူး မဟုတျဘူး ကှာ သူကငါ့သမီူးကို အပြျောကွံတာ ငါသိတယျငါပွနျဝဋျလညျတာ ဟူးး!!!;;;”😪
“မဟုတျပါဘူး စိတျအေးအေးထားပါကှ မငျ့သမီးရော ”
“သူအရမျးရှကျနတေယျ မစားမသောကျနဲ ဖြားနတေယျ ”
“မငျးသမီးလေးကို ဂရုစိုကျပါကှာ မငျလညျးဂရုစိုကျဦး”
“ငါရှကျတယျ ကှာ ငါအရမျးရှကျတယျ ငါ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာ ဘယျလိုမကျြနှာပွရမလဲ သမီးမိုကျ ငါ့မကြိနှာကို အိုးမဲသုတျတယျ တောကျ!!”//😪
“ဟာ မငျးအဲ့လိုပွောထှကျတယျနျော ဒီမှာ ဟြောငျ့ မငျးရကျစကျစှာ ခွှခေခြဲ့တဲ့ ပနျးလေးတှတေုနျးက မငျးနငျးခပြွေီး လှငျ့ပဈခဲ့သေးတာပဲ အခုမငျးအလှညျ့ကတြော့ မငျးက ကွှပေနျးဖွဈမှာကွောကျလို့ ရလေောငျးပေါငျးသငျနသေျောလညျး ကွှသှေားတဲ့ပနျးဖွဈတော့ မငျးက နာကငျြတတျပွီးပေါ့နျော မငျးပွောဖူးတယျလေ တားဆေးရှိရငျ ပွီးတယျဆို”
“ငါသိပါပွီကှာ ငါ့မှာ မောငျနှမ မရှိပမေယျ့ ငါ့သားသမီးနဲ့ကမြှ ဝဋျလညျရတယျ ငါသိပါပွီ ငါနားလညျပါပွီကှာ ”
“အရှကျတရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး တဈသကျလုံး ငါဒီစကား ငါ့နားမှာ ကွားလို့ ငါနောငျတရပါပွီကှာ ;;(ငိုနလေကျြ)😭
👉လူတဈယောကျအတှကျ အရှကျတရားမှာ တားဆေးမရှိ။
သိက်ခာမဲ့ သူဟာ ဘဝနိမျ့ကမြှုအတှကျ ရာနှုနျးတဈဝကျ သခြောနပေါပွီ။